नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पुरानो शानेबानि, नयाँ नेपालको नेबानीको खाने बानीले २८ बर्षमा निगम स्वाहा, २८ बर्षमा एउटा जहाज आउँदा पञ्चेबाजाले स्वागत गर्दै खुशी मनाउनु पर्ने कठै नेपाल र नेपालीको कस्तो नियती !!!
पुरानो शानेबानि, नयाँ नेपालको नेबानीको खाने बानीले २८ बर्षमा निगम स्वाहा, २८ बर्षमा एउटा जहाज आउँदा पञ्चेबाजाले स्वागत गर्दै खुशी मनाउनु पर्ने कठै नेपाल र नेपालीको कस्तो नियती !!!
चीन सरकारले अनुदानमा दिएको ५६ सिटे जहाज काठमाडौं आइपुगेको छ । जहाज आइतबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भयो । जहाजको सबै परीक्षणपछि मात्रै उडान अनुमतिपत्र दिइनेछ । अवतरणपछि विमानलाई पूजाआजासहित भव्य स्वागत गरिएको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा नियमले २८ वर्षपछि नयाँ जहाज ल्याएको
हो । चीन सरकारले नेपालको आन्तरिक उडानका लागि पाँच जहाज निगमलाई उपलब्ध गराउन सहमति जनाइसकेको छ ।
वायु सेवा निगमका जहाजहरु धेरैजसो दुर्घटनाभएर सकिएका छन् । भएको एउटा जहाजमासमेत चैतमा समस्या देखिएपछि निगम जहाज विहीन नै भएको थियो ।